ပြီးခဲ့သည် မေလ ၂၃ ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ Owensboro တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦး ရဟန်းသိက္ခာခံယူခဲ့သည်။ ထိုဘုန်းတော်ကြီးမှာ Fr. Stephen Van Lal Than (ချင်းလူမျိုး)ဖြစ်သည်။
Owensboro သာသနာ၌ရှိသော St. Stephen ကာသီဒြယ်ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးတွင် သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီး William F. Medley ၏ လက်တော်မှ ထာဝရ ရဟန်း သိက္ခာခံယူခဲ့သော Fr. Stephen Van Lal Than သည် Owensboro သာသနာ တွင် ၂၀၁၆ နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး ရဟန်းသိက္ခာတင်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပနိုင်စေသူဖြစ်ကာ၊ ဤ Owensboro သာသနာ မှ ပထမဆုံးဖြစ်သော ဘုန်းတော်ကြီး၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူသည့် ပထမဆုံးသော မြန်မာနိုင်ငံဖွား မြန်မာ နိုင်ငံသား စသည့် ‘ပထမဆုံး’ များစွာနှင့် သိက္ခာတင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘုန်းတော်ကြီးအားလုံးကလည်း Deacon Stephen Van Lal Than အား ရဟန်းသိက္ခာပေးရန် ထိုက်တန်မှုရှိသည်ဟု ထောက်ခံပေးခဲ့ကြသည်။
“ကျွန်တော့ဘဝခရီးက မထင်မှတ်တဲ့ အံ့အားသင့်စရာတွေများပါတယ်” ဟု ပျော်ရွှင် စိတ်လှုပ်ရှားနေသော ရဟန်းသစ်ကဆိုသည်။
သူသည်ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းအဆင့်ဆင့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ခံယူခဲ့ပြီး ရန်ကုန်ရဟန်း ဖြစ် တက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ် (၂၀၁၆) တွင် Bro. Martin Ma Na Ling နှင့်အတူ သူတို့နှစ်ပါး၏ ရဟန်းလောင်းဘဝပြင်ဆင်မှု၊လေ့လာသင်ယူမှုများကို အမေရိကန်နိုင်ငံ တွင် ဆက်လက်ခံယူရန် ရွေးချယ်ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံ Kentucky တွင်ရောက်ရှိ အခြေချနေထိုင်သည့် တစ်နေ့တခြား မြားပြားလာနေ သော ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားဘာသာတူသိုးစုအတွက်အစေခံကြည့်ရှုစောင့်ရှောက် ရန်ဖြစ်ကာ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် ဤနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်၍အမြဲနေထိုင် သွားရန် ဖြစ်သည်။
ရဟန်းသစ် က “ကျွန်တော်တို့ ဒီကို ၂၀၁၇-ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ သောကြာည သန်းခေါင်ကြီးမှာ ရောက်လာခဲ့ကြတယ်၊ တနင်္လာနေ့ကျတော့ Western Kentucky မှာတက္ကသိုလ်မှာတန်းပြီးကျောင်းစတက်ရတယ်၊ အဲဒီကျောင်းမှာပဲဆက်ပြီးကျွန်တော် တို့ လိုအပ်တဲ့ သင်တန်းအများကြီးတက်ရောက်သင်ယူခဲ့ကြရပါတယ်။
ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းစဝင်ခဲ့တုန်းက ဒီလိုနေရာဒေသကို ရောက်လာဖို့ စိတ်ကူး ထဲတောင်မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာကြီးနဲ့လူသားဝိညာဉ်တွေ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရရှိဖို့ ဘုရားရှင်ရဲ့အသုံးတော်ခံဖြစ်စေဖို့ ကျွန်တော့အားရဟန်းဘဝ ကို သူ့ကရုဏာတော်၊အကြံအစည်တော်တွေအားဖြင့်ခေါ်တော်မူတဲ့အတွက်ဒီနေ့၊ဒီမှာ ကျွန်တော်ရှိနေရပါပြီ။ ဘုရားသခင်က အရာရာကို သူ့အချိန်နဲ့သူ ဖြစ်စေတာပါ၊ ဘုရားစီမံမှုကို ဖြစ်လာစေဖို့ ကျွန်တော်တို့ အတင်းတိုက်တွန်းလို့ မရနိုင်သလို၊ ဘုရား ရဲ့ ချိန်ကိုက်မှုကိုတားဆီးလို့လည်းမရပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီကိုလာတုန်းက ရဟန်းဘောင် အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ ရောက်လာခဲ့တယ်၊ ဒီလို ကိုရိုနာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအချိန်ကြီးမှာ ရဟန်းသိက္ခာခံရလိမ့်မယ်လို့တော့ဘယ်လိုမှမတွေးမိခဲ့ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့်ဒီအခက်အခဲ တွေကြားထဲကနေပဲကျွန်တော့ကိုဘုရားသခင်ဒီနေရာမှာရှိနေဖို့အလိုတော်ရှိတယ် ဆိုတာ ခံစားမိပါတယ်။ ဘုရားသခင်က သူ့အလိုတော် ဆောင်ရွက်စေလိုတယ်ဆိုရင် အကူအညီလည်းဖြည့်တင်းပေးစမြဲပါ။ ကိုယ်တော်ရဲ့အစေခံတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် ဟာ သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကို သူ့ထံသို့ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်အပ်နှင်းခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု သူ၏အမြင်နှင့်ခံစားချက်ကို ပြောဆိုခဲ့ သည်။
Owensboro သာသနာတွင်လူထုနှင့်မစ္ဆားတရားဟောကြားရန်ပြန်လည် ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း လူဦးရေကန့်သတ်ထားဆဲဖြစ်၍ ထိုနေ့ကသိက္ခာတင်မစ္ဆားတရားတွင် ဘုရားကျောင်းထဲ လူအနည်းငယ်သာရှိရမည့် ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်ကြောင့် ပရိသတ်များစွာ မဖိတ်ကြားနိုင်ခဲ့ပါ။ တံတွေးအမှုန်အမွှားမှ ဗိုင်းရပ်ပိုးပျံ့နှံ့ နိုင်သဖြင့် ပရိသတ်နှင့် ဓမ္မသီချင်း သီဆိုခြင်းကိုလည်း မပြုနိုင်ခဲ့ကြပါ။ Bro. Martin Ma Na Ling တစ်ပါးတည်းမှသာ ဂီတာတီးလျက် ကိုယ်တော်မြတ် သီချင်းကို မြန်မာဘာသာဖြင့်သီဆိုချီးမွမ်းခဲ့ရသည်။
လာမည့်နှစ်တွင် ရဟန်းသိက္ခာခံယူမည်ဖြစ်သောထို Bro. Martin Ma Na Ling က “ရဟန်းဖြစ် တက္ကသိုလ်မှာ နှစ်တွေအများကြီး ကျွန်တော်နဲ့အတူနေခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ရဟန်းသိက္ခာခံယူတဲ့အတွက် ဝမ်းသာရပါတယ်၊နောက်ပြီး အမေရိကန်ကက်သလစ် အသင်းတော်အတွက်ရော၊ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်ရော သမိုင်း မှတ်တိုင်တစ်ခုလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပိုပြီးဝမ်းသာမိပါတယ်။ သူဟာ ဆရာတော်ကြီး Medley နဲ့ဒီသာသနာ ၊ ဒီမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါပြီ။ ဘုရားသခင်နဲ့ သာသနာတော်အတွက် ရာသက်ပန် ရဟန်းဘဝနဲ့အစေခံထမ်းရွက်သွားနိုင်စေဖို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်၊ သူ့အတွက်ဆက်ပြီး တော့ ဆုတောင်းပေးသွားကြပါစို့” ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။
ထိုသိက္ခာတင်မစ္ဆားပူဇော်မှုနှင့်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုအစီစဉ်တောက်လျှောက်လက်များကို မကြာ မကြာ ဆေးရည်ဖြင့် ဆေးကြော ကြရသည်။ အားလုံးက Mask တပ်၍ပါဝင် ကြရသည်မှာလည်း မည်သည့်သိက္ခာတင်ပွဲနှင့်မျှ မတူထူးခြားနေပြန်သည်၊သိက္ခာတင် ပေးသူ ဆရာတော်ကြီးကတော့ သိက္ခာတင်ရာ၌ အရေးကြီးသောစကား ပီပီပြင်ပြင် ကြားစေရန် လိုအပ်သော စကားပြောချိန်မျိုးတွင်မူ Mask ချွတ်၍ပြောရသည်။
သို့သော်လည်း မီဒီယာဖြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေသော ထိုနေ့ကအစီအစဉ်ကို မရေမတွက်နိုင်သော လူများစွာ စောင့်ကြည့်ပါဝင်နေကြမည်ဖြစ်သည်။
ထိုနေ့က ဆရာတော်ကြီး Medley ၏ ဩဝါဒတွင် သူသည်ယခုနှစ်၂၀၂၀ အစောပိုင်း က မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ Owensboro သာသနာနယ်တွင် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူများ၊ဒုက္ခသည်များကြည့်ရှုစောင့်ရှောက် သာသနာပြု နိုင်ရန်ဦးတည်သော သိုးထိန်းတမန်တော်လုပ်ငန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများ၊ ရဟန်းလောင်းကိုရင်များကိုခွင့်ပြု၊စေလွှတ်ပေးသည့် အတွက် မြန်မာကက်သလစ်သာသနာတော် နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာတော်ကြီးများအား ကျေးဇူးတင်ရန်လာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည့်အပြင် ‘Fr. Stephen Van Lal Than ရဲ့ မိသားစုနဲ့လည်း ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်၊သူ့မိဘနှစ်ပါးကိုတွေ့မြင် ရတာကျွန်ုပ်စိတ်ထဲရိုးရှင်းနှိမ့်ချစိတ်ဖြစ်လာစေပြီးမျက်ရည်တောင်ဝဲမိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သားကို အခုလိုရဟန်းဖြစ်တဲ့အထိ ပံ့ပိုးကူညီစောင့်ရှောက်ပေးတာအတွက် ကျေးဇူးတင် စကားပြောခဲ့ကြပါတယ်။ ခေါ်တော်မူခြင်းဆိုတာ အခုလိုမိသားစုမျိုး၊ နယ်ခံသာသနာမျိုး ကနေ အမြစ်တည်လာရတာပါပဲ။ Fr. Stephen Van Lal Than လို သားမျိုးကိုသာသနာအတွက်ပေးအပ်တဲ့သူ့မိဘတွေရဲ့ စွန့်လွှတ်မှုကိုလည်းချီးကျူး မိတယ်၊ သူတို့သားကို မိသားစုထဲကဆွဲထုတ်ပြီး ခဏခဏတွေ့ဆုံရမှာမဟုတ်တဲ့ဒေသ ဆီကို ဘဝတစ်ခုလုံးအမှုတော်ထမ်းပြီးနေထိုင်သွားရတော့မှာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်ကို Fr. Stephen Van Lal Than ရဲ့ဖခင်ကပြောတယ် မိုင်ပေါင်း တစ်သောင်းနှစ်ထောင် လောက် ဝေးတဲ့ဒေသမှာ သားအတွက် ဖခင်လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ ကျွန်ုပ်က ဖခင်နေရာယူပြီးသူ့သားကို ဆက်လက်စောင့်ရှောက်ပေးပါလို့တောင်းခံတာ ကိုကြားရတော့စိတ်ထဲမှာအတော်လေးခံစားလိုက်မိပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုယုံကြည်ပြီးဒီအဖေဟာသူသိပ်ချစ်တဲ့ဒီသားလူငယ်လေးကိုကမ္ဘာ့တစ်ဖက်ခြမ်းဆီသို့ သွားခွင့်ပြုခဲ့ကာ ကျွန်ုပ်ရဲ့သားအဖြစ်အပ်လိုက်တာကို ကြုံရတဲ့အဲဒီအချိန်ဟာ ဘဝမှာ ရိုကျိုးနှိမ့်ချတဲ့ခံစားမှုမျိုး ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲ ဖြစ်စေတဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ Owensboro သာသနာနဲ့ ကက်သလစ်အသင်းတော်ကြီးကိုယ်စား Fr. Stephen Van Lal Than ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်။ သင်တို့ရဲ့သားကို မိဘနေရာ ကနေ ဆက်လက်ပြီးအားပေးသွန်သင်ကြပါ၊သူ့ရဟန်းဘဝလျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ဝိုင်းဝန်း ဖေးမသွားကြပါ။ သင်တို့မိဘများကဏ္ဌဟာ အရေးပါ ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်လည်းပဲသင်တို့ ရဲ့ သားရဟန်းကို ဖခင်နေရာယူပြီး စောင့်ရှောက်သွားဖို့ ကတိပေးပါတယ်လို့ ကျွန်ုပ် ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်” ဟု ဆရာတော်ကြီး Medley မှသိက္ခာတင်ပွဲနေ့တွင် ပြန်လည် ပြောကြားလေသည်။
ထိုသိက္ခာတင်မစ္ဆားနှင့်ဝတ်ပြုအခမ်းအနားကိုစီစဉ်သူ Lauren Johnson က ပွဲပြင်ဆင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ “ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီးအတွင်းမှာ ဒီပွဲကိုစီစဉ်ရတာ အတော်လေးစီစစ်စဉ်းစားရပါတယ်။ ချုံ့လို့ရတာတွေချုံ့ မပါမဖြစ်၊မလုပ်မဖြစ်တဲ့ အပိုင်းတွေကိုသေချာထည့်သွင်း၊ ပြီးရင် အန္တရယ်ကင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မှုတွေက စိုးရိမ်စရာရှိပေမယ့် မလုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းလဲ (ဥပမာ- လက်ချင်းကိုင်တွယ်၍ လက်ဖဝါးပေါ်တွင် ဆီလိမ်းကျံခြင်းမျိုး)ဆိုတာတွေကို စဉ်းစား ပြင်ဆင်ပြီးစီစဉ်ခဲ့ရပါတယ်၊ ဒီလိုဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဘုရားသခင်က ဒီဝတ်ပြုကိုးကွယ် မှု တစ်ခုလုံးမှာ ကြီးမားတဲ့တန်ခိုးတော်နဲ့ပါဝင်တည်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလေးကို ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဟန်းသစ်ကိုပွေ့ဖက်ပြီးမနှုတ်ဆက်နိုင်ဘူး၊ သူ့အတွက် ဂုဏ်ပြုပွဲတွေမကျင်းပပေးနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်းဘုရားရှင်ဟာသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ ကောင်းချီးတွေ ချလောင်းပေးရင်းပါဝင်တော်မူပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
ရဟန်းသစ် Fr. Stephen Van Lal Than သည် Bowling Green ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပိုင်တွင် Fr. John Thomas နှင့်တွဲဘက်၍အမှုတော်ထမ်းရင်း ထိုဒေသရှိ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းကိုလည်း တာဝန်ယူကြည့်ရှု သွားမည်ဖြစ်သည်။
Fr. Thomas က Fr. Stephen နှင့်အတူအမှုတော်ဆောင်ရင်းသူ၏ရဟန်းဘဝ ဆက်လက်ရှင်သန် လာစေရန်ကူညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်၍ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း၊ သူအစေခံ ရမည့်သာသနာနယ်တွင်အဆင်ပြေစေရန်ကြည့်ရှုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
Owensboro ၏ St. Pius X Parish မှ faith formation director တစ်ဦးဖြစ်သူ OSU သီလရှင်အသင်းဂိုဏ်းဝင် Sr. Suzanne Sims ကလည်း “Fr. Stephen ဟာ သာသနာ အမှုတော်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်လောက်အောင် ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်မှုရှိခဲ့တဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးပါ။ မိဘ၊ဇာတိမြေနဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေသမှာ အစေခံသာသနာပြုဖို့ လိုလို လားလား ရှိခြင်းကိုကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပါပဲ။သူဟာကိုယ်ချင်းစာနာတတ်၊သူတစ်ပါးကို ဂရုတစိုက်စဉ်းစားပေးတတ်ပြီး၊အမြော်အမြင်နဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်မှာပါ။ တိုးပွါးလာနေတဲ့မြန်မာကက်သလစ်မိသားစုများရဲ့ဝိညာဉ်ရေးလိုအပ်ချက်တွေကို ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက် သူဟာသိပ်ကိုကိုက်ညီတဲ့သူလို့မြင်ပါတယ်၊ Fr. Stephen Van Lal Than ကိုသိခွင့်ရတာ ကောင်းချီးတစ်ခုပါပဲ” ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။
Fr. Stephen Van Lal Than ကလည်း “ကျွန်တော်သေချာပြောနိုင်တာက ဘုရားသခင် ဟာ သူ့ရဲ့ရဟန်းတော်များစွာထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်ဖို့ ကျေးဇူးတော်သီးသန့်နဲ့ကျွန်တော့် ကို မထိုက်တန်ပေမယ့် ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်၊ ကျွန်တော့ဘက်က လိုအပ်တာက သူ့ကိုမှီခိုဖို့ နဲ့ သူ့အတွက်အမှုဆောင်ဖို့သာမကဘဲ သူနဲ့အတူလုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့ ခံယူထား ပါတယ်” ဟု ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။